6 Uru nke Twitter maka ịkwalite ụdị gị | Martech Zone
6 Uru nke Twitter maka ịkwalite ụdị gị
Tọzdee, Machị 31, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
E nwere ọtụtụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya na teknụzụ teknụzụ nọ ebe ahụ na-ekwu maka ọnwụ Twitter. Aga m ekwu eziokwu na, agbanyeghị mkpọtụ azụmaahịa, m ka na-ahụkwa uru dị egwu n'elu ikpo okwu. Ọ bụrụ na onye si na Twitter na-agụ nke a, lee ihe m ga - eme ozugbo iji melite nsonaazụ azụmaahịa:
Mee ka ndị ọrụ kwụọ ụgwọ maka tweets na-akpaghị aka. Oh - enwere m ike ịnụ mkpu ahụ ugbu a, mana ọ bụrụ na ọ ga-ada ọnụ, aga m akwụ ụgwọ iji kwalite ọdịnaya m site na akpaaka. Obi ga-adị m ezigbo ụtọ na ndị spamm ga-ahapụ ngwa ngwa ahụ. Akpaghị aka spamming na Twitter bụ juru ebe niile n'ihi na ọ bụ free… ọ dịghị ọzọ mere.
Mee ka elekwasị anya na ịdị mma na mkpa maka uto. Anọghị m na Twitter ịgbaso ndị ama ama… Anọ m ebe ahụ ịkwalite, jikọọ ma soro ndị m hụrụ n'anya na-ekwukọrịta. Nke a bụ tweet nke chịkọtara mmetụta m:
Ebee ka "Kwụsị ịtụ aro na m na-eso Kardashian" bọtịnụ na @twitter? Odinaka @Support
- Douglas Karr (@onyedikachi_) March 28, 2016
N'ebe ahụ ị na-aga… Ekwenyere m na mgbanwe abụọ ahụ ga-agbanwe nsonaazụ azụmahịa metụtara na Twitter. O doro anya, ha agaghị enwe ike ịnya isi maka ndị ọrụ karịa [tinye ntanetị mmekọrịta ebe a], mana ọ ga-eweghachite ịhụnanya na ekele maka usoro nkwukọrịta nkenke nke gbanwere Intanet.
36% nke ndị ahịa azụtala onye ahịa site na Twitter
Ya mere, olee otu akara si eji Twitter eme ihe n'ụzọ dị irè? Follow.com mepụtara ihe omuma a ka ị mee ka aka gị dị ukwuu ma mee ka ikpo okwu dị elu maka nsonaazụ azụmaahịa na-eji usoro isii ndị a:
Atụla egwu kwalite akara gị na Twitter dị ka akaụntụ nke ya! Dị nwere ndị na-eso karịa ndị mmadụ na nkezi.
Tinye n'ọrụ Mgbasa ozi Twitter! Younwere ike bulite ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị debanyere aha gị ma wuo ngalaba ndị na-ege ntị iji zụọ mgbasa ozi gị na ndị ahịa dị ugbu a ma ọ bụ ndị dị ka ha.
Twitter bu ihe on-na-na-laa ikpo okwu, na-enye gị ohere pụrụ iche iji jikọọ na ndị na-eso ụzọ na-achọghị ịgụ akwụkwọ, naanị ihe ha chọrọ bụ ngwa ngwa, egwuregwu, ma ọ bụ ndụmọdụ.
Tinye mgbe niile akpọ-na-eme, ma ọ bụ retweet, download, oku, aha, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ iwu.
Jiri mmelite gị dịkwuo mma njikọ na ihe oyiyi maka njikọ miri emi na ịkekọrịta!
hashtag Tweets gị ka ị wee chọpụta na ọchụchọ. Gbalia weputa Tweets gi mgbe ndi n’eso gi gha ege nti (dika na izu uka!). Anyị na-emegharị Tweets anyị oge niile.
Nke a bụ Infographic, The Twitter Ike User eji Aghọ Aghụghọ Ule Mpempe akwụkwọ.
Tags: nkwalite ikaakwụkwọ aghụghọndepụta ndepụtankwaliteretweetTwitternjikọ aka twitterAhịa Twitter
Ebumnuche 10 nke Mgbasa Ozi Facebook
Apr 17, 2017 na 7: 52 AM
twitter na-aba oke uru ma ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe.
Echere m na onye ọrụ m toro na ọnụ ọgụgụ
ọdịnaya m dị mkpa na ihe ọmụma maka onye ọrụ.
daalụ nke ukwuu maka biputere ozi a, post a nyeere aka meziwanye ụzọ m si arụ ọrụ na twitter ma jiri ya karie na mbara.